INFRAWEEK 2021 - ubhaliso luvuliwe-iGeofumadas
Ikhaya/Ukufundisa i-CAD / GIS/INFRAWEEK 2021 - ubhaliso luvulekile
Ubhaliso ngoku luvuleleke kwi-INFRAWEEK yaseBrazil 2021, inkomfa ebonakalayo ye-Bentley eya kuthi ibonise ubuhlakani bobuchule neMicrosoft kunye neenkokheli zeshishini
Umxholo walo nyaka uya kuthi “Indlela usetyenziso lwamawele edijithali kunye neenkqubo zobukrelekrele ezinokubanakho ukunceda ukoyisa imiceli mngeni yehlabathi yasemva kwe-COVID”.
I-INFRAWEEK yazalwa phakathi komceli mngeni wokuzisa umxholo ofanelekileyo kunye nomgangatho wedijithali kwiinjineli, abakhi bezakhiwo, abakhi kunye nabasebenza kwiziseko kwilizwe liphela. Ngo-2020, umsitho wadityaniswa, ngamahlelo amabini, engaphezulu kwama-3000 iingcali ngubani owamkele isimemo sokufunda kunye nokuphonononga itekhnoloji entsha kwiiprojekthi zabo zeziseko zophuhliso, ngokwenza izinto ezintsha kumawele edijithali.
Uhlelo luka-2021 INFRAWEEK IBrazil Iya kwenzeka nge-23 ne-24 kaJuni, kwaye ithembisa ukuba iya kuba nkulu ngakumbi. Ukuqala ngobambiswano lobuchule phakathi Bentley kunye neMicrosoft, linoxanduva lokuvula inkomfa yomsitho, iBentley iya kubamba amagama amakhulu avela kwicandelo lobunjineli kunye nolwakhiwo lwezixhobo kumava edigital, aya kuthi ajongane nezihloko ezinje ngeedolophu ezihlakaniphile, ubuchwephesha belifu kunye nendlela yokusebenzisa amawele edijithali kunye neenkqubo zobuhlakani inokunceda ukoyisa imiceli mngeni emva kwendyikityha yokufa.
Abathathi-nxaxheba baya kuba namathuba awodwa okusebenzisana nabongameli, abalawuli kunye nabameli beCopel - Companhia Paranaense de Energia, iBIM Forum Brasil, ESC Engenharia, CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Consilience Analytics, ADAX Consultoria, Sabesp - Companhia de Saneamento do Estado isuka eSão Paulo, kunye neengcali ezivela kwiBentley Systems kutshintsho lwedijithali kulwakhiwo.
Kuza kubakho iingokuhlwa ezimbini zentetho, kwaye amagama aphambili okuvula aza kuhanjiswa nguBentley kunye neMicrosoft, eqinisa ubudlelwane obandisiweyo kwi2020 ukuqhubela phambili itekhnoloji yamawele eziseko zedijithali. Ngomhla wama-23, u-Alessandra Karine kunye noFabian Folgar baphonononga ukubaluleka kwetekhnoloji entsha yamafu kwihlabathi lasemva kobhubhane. Ngomhla wamashumi amabini anesine, uKeith Bentley, umsunguli kunye ne-CTO yeeNkqubo zeBentley, uya kuvula umsitho ngombono wolawulo ozibandakanyayo kwindawo evulekileyo yamawele edijithali.
Iingcali zeBentley zibonisa ezona ndlela zibalaseleyo kunye neetekhnoloji ukunika amandla iiprojekthi zeziseko zophuhliso zisebenzisa amawele edijithali ekucwangcisweni kwedolophu, ukuhanjiswa kweprojekthi, izixeko ezinobuchule kunye nokunye. Kulo nyaka kugxilwe kuthi ngumsebenzisi, kwaye i-INFRAWEEK Brasil 2021 iya kuba ngumboniso omkhulu onomxholo we-100% kunye nesimahla.
Ukujoyina abona badlali bakhulu kwicandelo kwaye ufunde ngeendlela ezilungileyo zeenkampani ezinkulu kwiiprojekthi zazo zeziseko zophuhliso, ubhalise simahla ngokunqakraza apha kwaye uzimase INFRAWEEK Brasil 2021, ngoJuni 23 no-24, ngo-14: 00 emva kwemini.